vendredi, 17 janvier 2020 20:23
Fitsarana: Hisy fandraisana mpitsara miisa 80
Nanamafy ny Minisitry ny fitsarana, Randrianasolo Jacques fa hisy fandraisana mpitsara miisa 80, ka 50 "judiciaire", 15 avy ny "Administratif" sy "Financier".
Hofaritana tsy ho ela ny datin'ny fifaninanana handraisana ireo mpitsara ireo.
vendredi, 17 janvier 2020 20:09
Savorovoro: Tsy azo aleha Anosibe
Nanao fampahafantarana ny Polisim-pirenena io hariva io fa : "Manoloana ny korontana sy fanakanan-dalana ataon'ireo andian'olona tsy fantatra etsy Anosibe dia efa eo am-pandraisana andraikitra mahakasika izany ny mpitandro ny filaminana. Araka izany dia iangaviana isika rehetra izay hihazo iny lalana iny mba hiverina avy hatrany mandra-piverin'ny filaminana".
vendredi, 17 janvier 2020 19:27
ADEMA: Hotantanan’ny tsy miankina ireo seranam-piaramanidina madinika
Vita sonia omaly ireo fifanaraham-pitantanana, andiany voalohany an’ireo seranam-piaramanidina sahanin’ny ADEMA.
Hotantanin’ny orinasa Harold Aéroport ny seranam-piaramanidina Antalaha, hotantanin’ny orinasa Floribis ny ao Vohémar, hotantanin’ny Groupe Spice Oil ny ao Mananara-Nord, hotantanin’ny Groupe Filatex ny ao Analalava sy ny ao Manakara. Hotantanin’ny orinasa SEAVA Sarl - consortium CCIV ny ao Antsirabe. Hotantanin’ny vondron’orinasa N.E.R.A.BTP ny ao Maintirano ary ny orinasa Aero Sud-Ouest no hitantana ny ao Morombe.
Hanampiana ny mpiasan’ny fahasalamana hanatsarana ny kalitaon’ny asa ara-pahasalamana amin’ireo tobim-pahasalamana eto Madagasikara ireo fitaovana ara-pitsaboana maoderina mitentina 4,5 tapitrisa dolara, natolotry ny fanjakana amerikanina, amin'ny alàlan'ny Sampandraharaha Amerikana Misahana ny Fampandrosoana Iraisam-pirenena (USAID) ireo.
Homena ny tobim-pahasalamana any amin'ny faritra 10 eto Madagasikara iasan’ny tetikasa ACCESS ny fitaovana ara-pitsaboana, izay ahitana fandrianan’ny hopitaly, fangalana tosi-drà, stéthoscopes sy maro hafa, raha toa ka atokana ho an'ny tobim-pahasalamana fototra sy ny hopitalin’ny Distrika ary ny biraon'ny fahasalamana ao amin'ny Distrika ny solosaina « tablette » sy ny laptop.
vendredi, 17 janvier 2020 14:32
Adin’ny mpivady: Maty voatsatok’antsy ramatoa, naratra vaky loha rangahy
Fifamaliana ara-bola no nitarika ny adin’ireto mpivady tao Ambodifiakarana, Fokontany Vohimary II, Kaominina Manato, Distrikan’i Farafangana.
Raha ny filazan’ilay rangahy dia nifampikasi-tanana izy mivady ka voasambotr’ilay ramatoa vadiny ny (testicules) vihin’ilay rangahy ary nofikiriny tsy namelany. Nandritra izay no nahavoaray antsy ilay rangahy ary notsindrominy teo amin'ny vavafony ilay ramatoa.
Nitsirara tamin'ny tany avy hatrany ramatoa ary nitolefika ihany koa rangahy noho ilay vihy voapotsitra. Mbola nodarohin’ny havan-dramatoa ity farany ka vao maika naratra vaky loha.
Samy nentina namonjy hopitaly be Farafangana izy roa hotsaboina. Tsy tana ny ain’ilay ramatoa noho ny ratra nahazo azy. Notazomin’ny Zandary atao famotorana ilay rangahy vadiny.
vendredi, 17 janvier 2020 14:22
Antsahabe – Bongatsara: Trano roa notafihin’ny jiolahy mitam-piadiana, nafatotr’izy ireo ny tompon-trano
Miharatsy ny fandriampahalemana ao amin'ny Kaominina Bongatsara, Distrika Antananarivo Atsimondrano. Tokantrano miisa roa tao Avarabohitra Fokontany Antsahabe no notafihin’ny andian-jiolahy mitam-piadiana ny alin’ny alakamisy hifoha ity zoma 17 janoary ity.
Norobain’ireo olon-dratsy ny entana sy ny vola tao amin’ireo tokantrano ireo, ary nafatotr’izy ireo ny tompon-trano ka tsy afaka nanao na inona na inona.
Niezaka nanaraka ny Fokonolona fa efa nadio ny rano nitan’ireo olon-dratsy.
Efa vonona ny toerana, toy izany koa ny zanakazo hovolena amin’ny alahady 19 janoary 2020, hanombohana ofisialy ny taom-pambolenkazo taona 2020, izay hatao eny Firarazana, Tampoketsa, Distrikan’Ankazobe.
Zanakazo maherin’ny 1 tapitrisa no hambolena eny an-toerana amin’io andro io, olona an’arivony no andrasana hanatanteraka izany eny an-toerana, tarihin’ny avy eo anivon’ny Fiadidiana ny Repoblika sy ny Ministera misahana ny Tontolo Iainana, ny avy amin’ny andrim-panjakana, ny ministera ary ny mpitandro filaminana.
Miandrivazo: Krevety tsy nisy taratasy 400kg nogiazana
Tra-tehaka tao Analamaizina Kaominina Andranomainty nandritra ny fitsirihana nataon’ny BPR Miandrivazo amin’ny lalam-pirenena ny andron'ny 16 janoary 2020 ny fiara iray nitondra krevety milanja 400kg sy trondro 30kg nokasaina ho entina any Antananarivo, na dia tsy nisy taratasy aza. Mbola voararan'ny lalàna anefa mitondra krevety satria tsy mbola misokatra ny fotoam-panjonoana.
Nogiazana avy hatrany ireo hazandrano ary nanokafana famotorana niaraka tamin'ny sampandraharahan’ny Jono aty Miandrivazo.
Taorian'izany dia nozaraina ho fanampiana an'ireo voafonja sy ireo Tobim-pahasalamana ao an-toerana ireo entana rehefa hita fa azo hohanina.
vendredi, 17 janvier 2020 09:45
Soavinandriana - Sambava: Dibo-drano noho ny fanotorana tany
Ao anatin'ny rano ireto fianakaviana maro ireto no miaritra ny rano miakatra sy miditra any an-trano vao avy ny orana. Izany dia vokatry ny fanotorana tany sy fanaovana rindrim-bato eo akaiky eo, nefa tsy nanisy lalan'ny rano.
Tsy sahy mitroatra ny mponina noho ny kely tsy mba mamindro, manontany tena sisa ny hoe nahazo alalana tamin'ny Kaominina ve izao fanotorana tsy nanisy lalan-drano izao, ka dia ny manodidina no iharan'ny fiakaran'ny rano.
Efa andro vitsivitsy izay no avy ny orana taty Sambava, misy renirano ahiana hiakatra, fa arahi-maso aloha hatreto.
vendredi, 17 janvier 2020 09:44
Journée mondiale des stylos à plume.